China 1000ml lead-free soda ibhotile mveliso kunye nabenzi | Iglasi yaseHonghui
Umsebenzi onzima woKwakha:
Iibhotile zeglasi ezinokuphinda zenziwe kwakhona zenziwe ukuba zihlale. Zenziwe ngeglasi eyomeleleyo ebonelela ngokuchasana okuphezulu kwimpembelelo kunye notshintsho lobushushu. Ukuvalwa kwentsimbi engenacingo kunye neepolypropylene caps zinika ukumelana okuhle kwerusi kwaye ayizukucofa okanye ixolo njenge chrome.
Kukhuselekile Kuwe nakuMhlaba:
Iimathiriyeli ezisetyenziselwa ukwenza iibhotile zethu ziipesenti ezingama-100 ezingenatyhefu, ezinokuphinda zisebenze kwakhona kwaye zikhuselekile kwindalo esingqongileyo. Zisimahla i-BPA, ayinazikhokelo kwaye ayinasimahla ezenza ukuba zibe sisisombululo esikhuselekileyo sokugcina xa kuthelekiswa neplastiki. Ngokusebenzisa le bhotile yeglasi inokuphinda isebenze, unciphisa ukusetyenziswa kweplastikhi ekhayeni lakho.
Ukhuseleko kunye nokuvuza kweNqaku lobungqina:
Ibhotile yethu yeglasi enesimamva ikuvumela ukuba ugcine ioyile, iziselo kunye nolunye ulwelo ngokukhuselekileyo ngaphandle kokukhathazeka ngokuchitheka okungcolileyo. Ukuvalwa kwe-Clamp kunikezela ngolondolozo olungena moya, lusenza isisombululo sokugcina iwayini, iziqholo kunye nesinongo
UKHUSELEKO, I-CAP YOKUVELA: Ibhotile nganye yeglasi iza neplastikhi ephathekayo kunye nokumiswa kwesilicone okuya kuyitywina ngokuqinileyo ibhotile yakho. Iibhasikithi zethu ezingangeni moya ziqinisekisa ukuba iziselo zakho azizukuxhuma kwaye ziya kuhlala zintsha kwaye zimnandi ixesha elide. Oonobumba kulula ukususa nokubeka.
UKUGQIBELELA UKUSETYENZISWA KWE-MULTI: Sebenzisa ibhotile yakho yeglasi ngesiciko ukugcina ioyile, i-kefir, iziselo, ikombucha, iViniga, ibhiya, amanzi okanye isoda. Slayida kwisikhafu sokungena emoyeni ukugcina kunye nokugcina ukutsha kwezinto ozithandayo kunye neziselo.
UKUQINISEKA, UMGANGATHO OPHEZULU: Ukuza ngaphakathi, ezi Bhotile zeBrewing zenziwe ngeglasi eqinileyo, ecacileyo; ilungele ukusetyenziswa okuhlala ixesha elide, okuphindaphindiweyo. Uyilo lwethu olucekeceke lwentamo luvumela ukuthulula ngokulula ngaphandle kokuchitheka okungafunekiyo. Ayikho enye into engcono!
YONWABELELA UKUSETYENZISWA KOMNGCIPHEKO: Zonke iibhotile zethu ezijingiweyo ze-BPA, ityhefu, imichiza kunye nokukhokelela ngaphandle. Ngoku ungagcina iioyile zakho, iziselo okanye amanzi ngaphandle kokukhathazeka ngokungcoliseka. Ifumaneka kwiseti ye-6, siqinisekisile ukuba uya kuba neebhotile ezaneleyo zokusetyenziswa.
I-PREMIUM HEAVY-UMSEBENZI WOKWENZA: Ngomzimba weglasi owomeleleyo kwaye onamandla, iibhotile zethu zeFlip Top zakhiwe ukubonelela ngokuchaseneyo notshintsho lobushushu kunye nefuthe ngengozi. Ukucoca, faka nje ibhotile yakho kwisitya sakho sokuhlamba izitya.
Egqithileyo Ibhotile yesiselo ecacileyo yeglasi eyi-1000ml
Okulandelayo: Yokakayi ngaphaya yesiselo sebhotile
Iibhotile zotywala Ihowuliseyili
Iibhotile zotywala zeglasi
Iibhotile zoGlasi zeSiselo ngeGlasi
Ibhotile yamanzi ngeZiselo eziCarbonated
Ibhotile yesiselo ebonakalayo eyi-150ml